Lalao AppImage: Aiza no ahazoana lalao AppImage bebe kokoa? | Avy amin'ny Linux
Araka ny hitantsika, tamin'ny antso nataontsika teo aloha izay nantsoina "Counter Strike 1.6: Ny fomba tsara indrindra hilalaovana an'io FPS amin'ny GNU / Linux!", mametraka programa asa na lalao ao amin'ny ".AppImage format" mazàna izany a alternativa (vahaolana) ilaina kokoa sy azo ampiharina kokoa noho ny hafa, rehefa tsy ampidirina ao anaty trano fitahirizam-bokatra misy azy GNU / Distros Linux.
Noho izany, tao anatin'io fidirana io dia naneho hevitra fa, nisy rakitra azo ary nampiasaina tao "Format .AppImage" avy amin'ny Fantsona telegram. Ary na dia, Fantsona Telegram sy vondrona Matetika izy ireo dia tena mahay manamboatra rindran-damina fampiharana sy lalao, ny zavatra tsara indrindra hatreto dia ny fahafantarana hoe iza no tranokala misy fiasa mitovy amin'izany, izany hoe, misy mahafinaritra sy mahaliana ao anatiny Lalao amin'ny «.AppImage format».
Ho an'ireo izay liana amin'ny fikarohana dia nilaza ny famoahana hevitra "Counter Strike 1.6: Ny fomba tsara indrindra hilalaovana an'io FPS amin'ny GNU / Linux!" Azonao atao ny mijery an'io sy ireo hafa mifandraika amin'izany, amin'ny alàlan'ny rohy etsy ambany:
"Azo antoka, "Counter Strike 1.6" Sady tsy maimaimpoana no tsy misokatra, fa raha ny filalaovana namana ankehitriny, ary indrindra ireo taloha, dia azontsika atao ny tsy miraharaha, mandritra ny fotoana fizarana mahasalama, tsy mampiasa lalao maimaimpoana sy malalaka, na eo aza ny maro ary tena tsara fa misy, araka ny efa nolazainay tamin'ny fanontana taloha hafa."
1 Lalao AppImage: tranokala fampidinana rakitra AppImage
1.1 Inona no tranokala misy rakitra .AppImage misy ankehitriny?
Lalao AppImage: tranokala fampidinana rakitra AppImage
Inona no tranokala misy rakitra .AppImage misy ankehitriny?
Avy eo izahay dia hanambara Tranonkala 4 mahaliana, ilaina ary azo ampiharina izay ahafahan'ny tsirairay miditra amin'ny fikarohana, misintona ary mametraka karazana programa, ary indrindra indrindra Juegosao amin'ny endrika «format .AppImage»:
Ity tranokala ity dia misy katalaogin'ny programa mihoatra ny 100 amin'ny endrika .AppImage, ary mitombo hatrany izy io. Ny programa AppImages dia rindranasa mitokana izay azo sintonina fotsiny ary mihazakazaka amin'ny fizarana Linux. Ho fampidirana tsara sy mora kokoa dia azo sintonina sy ampiasaina AppImageLauncher.
Ity tranokala ity dia ny App Store of the Organisation izay namorona ny fonosana AppImage, izany hoe AppImage.org.
Ity tranokala ity dia manangona sy mizara lalao Linux be dia be ho toy ny fonosana azo entina amin'ny tena izay afaka (na tokony) hiasa amin'ny rafitra Linux. Mampiasa ny endrika fonosana AppImage izy io, ary majika fanoratana sasany.
Linux-Apps.com (Lalao AppImage)
Ity tranonkala ity dia misy fizarana Games, amin'ny endrika maro ao anatin'izany AppImage. Izany hoe tompon'andraikitra amin'ny famonosana sy fizarana rindranasa sy lalao Linux lehibe toa ny fonosana azo entina sy mitokana izay afaka (na tokony) hiasa amin'ny rafitra Linux. Mampiasa ny endrika fonosana AppImage, ary majika amin'ny scripting.
Ho fanampin'izay, izy dia ampahany amin'ny antso lehibe kokoa sy fantatra kokoa Pling, izay mifandimby, dia ampahany amin'ny Opendesktop.org. Ny pling dia ny fizarana fivarotana, izay ahafahan'ny mpamorona mamoaka ny vokariny sy ny atiny maimaimpoana ary mahazo onitra kely isaky ny misintona ny vokatra na mijery medium iray, voafetra amin'ny habetsaky ny fanomezana azo isaky ny fizarana.
Raha olon-kafa mahalala hafa tranonkala mahaliana, ilaina ary azo ampiharina miaraka amina tanjona na fiasa mitovy amin'izany, avelantsika ny anarany, amin'ny hevitr'ity publication ity.
Manantena izahay fa izany "lahatsoratra kely ilaina" momba ny inona tranonkala misy mba hikarohana sy hisintomana ny lalao ao amin'ny «formato .AppImage», noho izany mametraka sy milalao mora ireo izay tiantsika sy tompointsika; dia liana sy ilaina lehibe, ho an'ny rehetra «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» ary fandraisana anjara lehibe amin'ny fanaparitahana ny tontolo iainana mahatalanjona sy goavambe ary mitombo «GNU/Linux».
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Lalao AppImage: Aiza no ahazoana lalao AppImage bebe kokoa?
Auction i Tim Berners-Lee ny kaody loharano niavian'ny www